မြရွက်ဝေ: Why? Why? Why?
Posted by မြရွက်ဝေ at 6:41 PM
ညီမလေးရေ.. တို့နိုင်ငံမှာ အဲဒီလိုအဖြစ်တွေ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရင်လည်း လေဆိပ်မှာတအားရစ်တယ်ဆိုတာတွေလည်း ခဏခဏ ကြားနေရတယ်။ ပစ္စည်းလိုချင်လို့ထက် ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ တမင်တကာ ကြံဖန်ပြီး အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံကို ဆွဲထည့်နေကြတာပဲ။ အမလည်းတစ်ခါမှ မပို့ဖူးပေမယ့် ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အကုန်ပြန်ရောက်စေချင်တာပေါ့...
ခေတ်ဆိုး. စနစ်ဆိုးအောက်က အမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲ..
အမရေ ဒေါသမထွက်နဲ့အုံး ဖိနပ်တရံ နဲ့ကတ်ကျီး
အမကလည်း ကျမဖြင့်ကြုံဖူးတာ ၃၊၄ နှစ်ရှိပေါ့။ စာတိုက်ကနေပို့လိုက်ရင်
ရောက်လာတဲ့ ပါဆယ်ကို ကိုယ့်နံမယ်ပါရက်နဲ့ မှတ်ပုံတင်လည်းမရ၊ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ(နေထိုင်ကြောင်း) ပါ ပြရသဗျ။ ပြီးတော့ ပို့တဲ့သူနံမယ်၊ ပိုရစ်ချင်တဲ့အခါများ ဘာတော်လဲတောင်မေးလိုက်သေး။ ဘာပါလဲလို့မေးမယ်။ ဖောက်စစ်မယ်။ ပြီးရင် စည်းကြပ်ခွန်ပေါ့ အဲဒီကောင်တာကိုသွား စောင့်ရတယ်။ အဲဒီအခွန်ကြပ်တဲ့ ကောင်တာ က ဘလောက်တော့တန်မှာပဲ လို့ မှန်းပြီး အခွန်ကောက်တာ။ တခေါက်ကဆို အထဲကစာပါကိုယ့်ရှေ့ဖောက်ဖတ်တာ။ အဲဒါက အဒေါ်က စာတိုက်ကပို့လို့
EMS Service နဲ့ပို့တဲ့ဟာကတော့ အိမ်ကိုတန်းရောက်တယ် ပုံးမဖောက်ဘူး ပိုက်ဆံပဲတောင်းတယ် :)